အထွက်နှုန်းနှင့် ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှု (Biomass) ကောင်းသော ပဲလွမ်းမျိုးများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း သုတေသန
မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍရေးနှစ်၌ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးဧရိယာ ဧက (၁၀.၀၃) သန်းရှိပြီး၊ ဆောင်းရာသီ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧရိယာ ဧက (၆.၉၂) သန်းနှင့် မိုးရာသီ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧရိယာ ဧက (၃.၁၁) သန်းရှိသည့်အနက်၊ ပဲလွမ်းစိုက်ပျိုးဧရိယာ စုစုပေါင်း ဧက (ဝ.၃၁) သန်း (ဆောင်းပဲလွမ်းစိုက်ဧက- ဝ. ၂၆ သန်း နှင့် မိုးပဲလွမ်းစိုက်ဧက- ဝ.၀၅ သန်း) ရှိပါသည် (အရင်းအမြစ်- စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန- Call Center)။ ပဲလွမ်းသီးနှံသည် ရေငတ်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချစိုက်ပျိုးရာ၌ အရေးပါသည့် သီးနှံဖြစ်၍ မိုးနှောင်းရာသီ ဆောင်းသီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုးရန် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
ပဲစိုက်တောင်သူများအနေဖြင့် ပဲလွမ်းသီးနှံကို စားသုံးမှုဖူလုံ၍ အပိုဝင်ငွေ ရရှိရန်အတွက်သာမက၊ တိရိစ္ဆာန်စာနှင့် သဘာဝမြေသြဇာ (သစ်စိမ်းမြေသြဇာ) အဖြစ် အသုံးပြုရန် စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့်၊ အပင်ကြီးထွားမှု ကောင်း၍ အထွက်ကောင်းသော ပဲလွမ်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ သုတေသနပြု ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးသည် အရေးပါသည့်ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ဇီဝနည်းပညာ၊ မျိုးစေ့ဘဏ်နှင့် သီးနှံကာကွယ်ရေးသုတေသနဌာနခွဲ၊ ဇီဝနည်းပညာ သုတေသနဌာနစုရှိ ဌာနစုတာဝန်ခံ ဒေါ်သက်သက်ဦး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် စမ်းသပ်ကွက် တာဝန်ခံ ဒေါ်စုသီရိလွင်နှင့် အဖွဲ့သည် အထွက်နှုန်းနှင့် အရွက်၊ ပင်စည်စသော ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလေးချိန် (Biomass) ကောင်းသော ပဲလွမ်းမျိုးများ ရှာဖွေခြင်းသုတေသနကို (၂၀၁၉- ၂၀၂၀) မိုးနှောင်းရာသီ သုတေသနအဖြစ် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အဆိုပါ သုတေသနစမ်းသပ်ကွက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မိုးနှောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဘဏ်၌ စုဆောင်းထားရှိသည့် ပဲလွမ်းမျိုး (၁၈) မျိုးကို အသုံးပြု၍ သုတေသနပြု စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အထွက်နှုန်းကောင်း၍ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှုကောင်းသည့် အလားအလာကောင်းသော ပဲလွမ်းမျိုး (၇) မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အလားအလာကောင်းသည့် ပဲလွမ်းမျိုး (၇) မျိုးအား (၂၀၁၈- ၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မိုးနှောင်းရာသီတွင် ပထမအကြိမ် အကွက်ကျယ် သုတေသနအဖြစ် ဘိုကိတ်ပဲလွမ်းမျိုးအား စံထားမျိုးအဖြစ် အသုံးပြု၍ သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၊ Acc. No. 4246 (IT-82D-752) နှင့် Acc. No.4268 (Cowpea) တို့မှာ အထွက်နှုန်းကောင်း၍ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှု (အလေးချိန်) အကောင်းဆုံးမျိုးများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်အား ပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက် (၂၀၁၉- ၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ မိုးနှောင်းရာသီတွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အဆိုပါ အလားအလာကောင်း ပဲလွမ်းမျိုး (၇) မျိုးနှင့် စံထားမျိုး ဘိုကိတ်တို့အား ဆက်လက်သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ထားရှိရာ၊ မျက်မြင်အနေအထားအရ Acc. No. 4246 (IT-82D-752)၊ Acc. No.4268 (Cowpea) နှင့် Acc. No. 7692 (Gangaw Bocake) တို့မှာ အရွက်၊ ပင်စည် အစရှိသော ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ အထွက်နှုန်းကောင်း၊ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှုကောင်းသည့် ပဲလွမ်းမျိုးသစ်များအား တောင်သူများထံ မကြာမီ ဖြန့်ဝေနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပဲလွမ်းသီးနှံသည် အသားဓါတ် (ပရိုတင်းဓါတ်) ၊ သတ္တုဓါတ်နှင့် အမျှင်ဓါတ် (ပရိုတင်းဓါတ်ပါဝင်မှု- ၂၃.၅၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်မှု- ၁၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း) ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် စားသုံးသီးနှံဖြစ်ခြင်း၊ အပင်အစိတ်အပိုင်းများသည် တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် အသုံးဝင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေ လိုအပ်ချက် နည်းခြင်းနှင့် လေထုထဲမှ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်အား ဖမ်းယူပေနိုင်ခြင်းကြောင့် သစ်စိမ်းမြေသြဇာအဖြစ် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ပင်လုံး အသုံးချနိုင်သည့် အကျိုးရှိသီးနှံ (Zero Waste Crop) ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်းက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ်အတွင်း အားပေးတိုက်တွန်း လမ်းညွှန်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
သုတေသနလက်ထောက်- ၄ ကျောထောက်နောက်ခံပြု အလုပ်သင်ဝန်ထ...
စိုက်ပျိုးတောင်သူများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ သုတေသနနှင...
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DAR) ၏ (၁၆) နှစ်ပြည့်...
ရာသီအလိုက် ဖြစ်ထွန်း၍ အဝါရောင်မိုစေ့ရောဂါဒဏ် ခံနို...